Proteolytic ejenti enzymatic "Karipain" inikezwa njengoba izinjongo zokuvimbela nokwelapha yezifo amalunga nomgogodla. Umuthi siyasebenza kakhulu ngoba ukususwa izibazi keloid, kungakhathaliseki imvelaphi yabo. Kusho "Karipain" (kobufakazi nesineke ukusekela lokhu) aqede ubuhlungu, iyama izinqubo ukuvuvukala, kuthuthukisa microcirculation emisipheni. Umuthi ngesivinini ukuvuselelwa (yokutakula) cartilage, akwazi ukugcina intervertebral.
"Karipain" lisho ukuthini. imfundo
Iyatholakala kusho ngesimo powder lyophilized (namafutha ezomile) in vials umthamo igremu elilodwa. Ngaphezu kwalokho, lo izidakamizwa ikhishwe "Karipain" (gel) ebhokisini of namamililitha amahlanu.
Ukhilimu iqukethe glucosamine hydrochloride, asidi i-hyaluronic. Njengoba izingxenye asizayo esetshenziswa: amanzi Purified, glycerin, petrolatum, lanolin, kanye nezinye izinto.
Izidakamizwa "Karipain" (ukubuyekezwa odokotela siliqinisekise) has a ezihlukahlukene kakhulu ezingenzeka ezibhekwa imiphumela.
Ngenxa asidi i-hyaluronic eziqukethwe ukhilimu, ukuze ulapha ukulethwa yezingxenye asebenzayo endaweni ezilimele. Ngokuqondene nalokhu, i-ayisikhilimu "Karipain" (izibuyekezo namazwana wezazi uqinisekise lesi) uvelele impela ngempumelelo ngisho ngaphandle izinqubo ukwelashwa ngokomzimba, kuncike ukusetshenziswa njalo.
Umthelela zokwelapha zomuthi ngenxa izakhiwo zokwelapha yezingxenye e ngezithako zawo. Ngokwesibonelo, papain, iprotheni engokwemvelo imvelaphi isitshalo. Le ngxenye kunomphumela abakhethayo ku uqwanga emalungeni kanye nomgogodla ogobile. Ukuhlola uhlobo isenzo papain, izazi basibiza ngokuthi "yisikhathi yemifino pepsin." Papain has umsebenzi hhayi nje kuphela acid kodwa futhi abathathi hlangothi futhi ane-alikhali medium ku-pH 3-12. Ngaphezu kwalokho, ingxenye isinyathelo kungathi ehlukile lokushisa umbuso. Papain ikhuthaza ukubhujiswa amaprotheni unviable mass, ngokuba ngenxa yalokho iphephile kwezicubu iphila.
Lapho yaphathwa lokuhlala oqabulayo papain ku obonakele zone electrophoresis indlela, kukhona ukwehla kancane kancane ukuthambisa futhi herniated akwazi ukugcina intervertebral. Ezimweni eziningi, lokhu senzo ngempela eyanele ukuze ukukhulula isiphetho emsipheni. Ngenxa yalokho, ngizwa ubuhlungu uya kancane kancane.
Glucosamine likhona iqembu glycoproteins. Le ngxenye is ngenkuthalo iqhaza kumiswa uqwanga kwezicubu synthesis izinto ezahlukene. Glucosamine uyakwazi kunethonya nomphumela zokuzivikela futhi okuzivuselela ku uqwanga isakhiwo, ngenkuthalo engena phakathi kwabo.
I isici esiyinhloko oketshezini lwamalunga kuyinto asidi i-hyaluronic. Le into is kabanzi ekwelapheni bursitis, i-osteoarthritis, Arthritis. Asidi i-hyaluronic kusiza ukucindezela izinqubo esiwohlozayo oqwangeni ivikela ebusweni articular. Ngenxa isenzo sokuqanjwa ingxenye ukuzinza uketshezi lwamalunga. Asidi i-hyaluronic Kwenziwa zokuthutha nezinye izithako ezisebenzayo ezicutshini futhi izitho, kanye ukulawula ukukhululwa kwabo. Uphiko ngokuphelele non-esinobuthi eziphila ngokuphelele iyahambisana izicubu emzimbeni.
Kusho "Karipain" (ukubuyekezwa odokotela kuyadida kuwo) kufanele lisetshenziswe osteochondrosis umgogodla, umbhunu lamadiski intervertebral ngeendlela ezihlukeneko, ehlombe eqandisiwe, Umhubhe carpal syndrome. Ngu izinkomba futhi zihlanganisa hernia SHmorlja, sciatica discogenic, arachnoiditis umgogodla futhi palsy, arthrosis, samathambo emalungwini ezinkulu. Izidakamizwa "Karipain" (ukubuyekezwa odokotela bese ukhomba ku-ke) siyasebenza kakhulu e neuritis we emsipheni ebusweni, izibazi keloid Lokudabuka ezahlukene. Cream ikhuthaza ukuphulukiswa okusheshayo ukusha kanye amanxeba.
Ngaphambi kokusebenzisa "Karipain" izidakamizwa kufanele kudokotela futhi ufunde imiyalelo ngokucophelela.
Isiraphu amathonsi 'Sinupret' izingane
"Erespal" amaphilisi-mbumbulu. Yokusetshenziswa
Transformers Decepticons futhi Autobots: izinkolelo-mbono izitho zomzimba kanye izimbangela wobutha